मैले अर्का अध्यक्षलाई पदबाट हट्नु भनें भने के हुन्छ ?- प्रधानमन्त्री ओली (पूर्णपाठ)
गत कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्दै १९ पेजको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावबारे प्रसंग निकाल्दै अध्यक्ष ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमा आफुमाथि अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक आरोप लगाइएको बताएका हुन् ।
उनले आफुले अर्का अध्यक्षलाई पदबाट हट्नु भनें भने के हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, 'मलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुईटैबाट हटाउने तयारी पनि गरिएको छ, हट्न भनिएको पनि छ । त्यसैगरी मैले अर्का अध्यक्षलाई हट्न भन्यो भने के हुन्छ ? विधि पद्धतिका कुरा के हुन्छन् ? सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका कुरा के हुन्छन् ? त्यसमा एकपटक विचार गर्ने हो कि ? किनभने मैले हट्न भनेँ भने त्यसले त अर्को वातावरण निर्माण गर्नसक्छ ।